October 28, 2019 - Myitter
သူဌေးဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေ မဖြစ်မနေ လိုက်နာမယ့်အချက် ( ၁၀ ) ချက်..
October 28, 2019 Myitter 0
(1)နည်းနည်းပြော၊များများနားထောင် ဒီအချက်ဟာ သင်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့စကားစမြည်ပြောနေတဲ့အချိန်မဟုတ်တောင်မှ အရေးကြီးပါတယ် … ။ စီးပွားရေးလောကမှာလဲ လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အကြိုက်တွေကို နားထောင်ဖို့လိုတယ်နော် “ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ငှားပြီး ဘာလုပ်ပါလို့ ခိုင်းတာဟာ သဘာဝမကျဘူး … ။ ငါတို့ကို ဘာလုပ်ပါလို အကြံပေးဖို့ ငှားတာပဲ ဖြစ်တယ်”လို့ Steve Jobs ကဆိုဖူးပါတယ်။လူတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ […]
အွန်လိုင်းမှာ လူကြည့်များနေတဲ့ ကိုရင်လေးတွေရဲ့ စက်ဘီးစီးကျွမ်းကျင်မှု့ ရုပ်သံ
အြန္လိုင်းမွာ လူကြည့္မ်ားနေတဲ့ ကိုရင်လေးတြေရဲ့ စက္ဘီးစီးကျမြ်းက်င္မှု့ ရုပ်သံဖိုင် ကျန်ြတ္တောိျု့မန္မာနိုင်ငံဟာဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမ်ားဆုံးရွိတဲ့နိုင်ငံရွိတဲ့နိုင်ငျံဖစ္ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမွာ ဘုရား တရား သံဃာ ဆိုပီး ရတနာသုံးပါးရွိပါတယ်။ သံဃာဆိုတဲ့အထဲမွာ သာမေဏကိုရင်လေးမွအစ ထေရ်ကြီးဝါကြီးတြေအထိ ပါဝင္ပါတယ်။ ဟိုရွေးယခင္ကာလမွာ ဘုန်တော်ကြီးကေ်ာင်းပညာရေးထြန်းကားခဲ့ပီး သံဃာတ္မော်ားလည်း မ်ာျးပားစည္ကားခဲ့ပါတယ်။ မ်က်မွောက်ခေတ္ကာလမွာတေျာ့မန္မာနိုင်ငံ သံဃာတော်အေရအတြက်ဟာ တစ်နေ့တစ်ျခားနည်းပါးလာတာ […]
လူတိုင်း ထီပေါက်ချင်ကြတယ်.. ဒီနည်းကို မသုံးကြလို့ မပေါက်ကြသေးတာပါ
အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာတော်…။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ် အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ် ပါသည်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ […]
“အတိတ်ကို လက်ညှိုးထိုး အပြစ်တင်နေလို့ ပိုမိုတိုးတက်လာစရာ အကြောင်း မရှိ”
အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့သည်များကို လက်ညိုး ပြီး အပြစ်တင်နေမည်ဆိုပါက ပိုမိုတိုးတက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ခှုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်သည်။ “အတိတ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အတိတ်ကို လက်ညိုးထိုးပြီး အပြစ်တင်နေလို့ ပိုမို တိုးတက်လာစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာမှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ တော်တော်များများ […]
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟောကိန်းများ
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟောကိန်းများ ကိုယ့်ရဲ့သွေးအမျိုးအစားအလိုက် တွက်ချက်ပြီးတော့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ ဟောကိန်းလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့တွေလည်း သွေးအမျိုးအစားအလိုက် နည်းနည်းပါးပါးတော့ သိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ ပြောချင်တာကတော့ အချစ်ရေးမှာ ကံခေလွန်းတဲ့ သွေးအမျိုးအစားလေးတွေ အကြောင်းပါပဲ။ ထိုသွေးအမျိုးအစားတွေကတော့ ၁။ A သွေးပိုင်ရှင်လေးများ သူတို့ဟာ တကယ်တော့ […]
ပဲခူးဝန်ကြီးချုပ် ဆရာ၊ ဆရာမများကို တရားဝင် အခမ်းအနားဖြင့်တောင်းပန်
ပဲခူးဝန်ကြီးချုပ် ဆရာ၊ ဆရာမများကို တရားဝင် အခမ်းအနားဖြင့်တောင်းပန်… ပဲခူးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်းက ယနေ့တွင် ဆရာ၊မများကို တောင်းပန်စကားဆိုခဲ့သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များရှေ့၊မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာ၊မများအဖွဲ့ချုပ်ရှေ့တွင် တောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပဲခူးဝန်ကြီးချုပ်က အောက်တိုဘာလ ၅ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သော ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နတ္တလင်းမြို့နယ် ဒမငယ် သစ်ချိုခြံ လုထု​တွေ့ဆုံပွဲတွင်ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာရရှိရေး တင်ပြချက်အား ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် “ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမရှိတာကောင်းတယ်၊ဆရာ၊ဆရာမတွေရပ်ထဲရွာထဲနေတော့ ရွာသားတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကျ၊ဒါမှထွက်မသွားမှာလေ၊ရွာသားတွေက […]
ရန်ကုန် လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် ကားပစ္စည်း လိုက်လံခိုးယူ သူတစ်ဦး (ရုပ်သံ)
ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော်မြို့နယ်(၁၂)လမ်းအလယ်လမ်းတွင်၊ ယနေ့နံနက် ၄နာရီ ၁၇မိနစ်တွင် ကားပစ္စည်းလိုက်လံခိုးယူသူတစ်ဦး ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲ Belta ကားတစ်စီးမှကားပစ္စည်းကိုခိုးယူသွားခဲ့ပါသည်။ အများပြည်သူများဝိုင်းဝန်း Share ပေးခြင်းဖြင့်မကောင်းမှု့ ဒုစရိုက်များကင်းဝေးအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြပါစို့… လမ်းမတော် ၁၂ လမ်းအလယ်လမ်းတွင် CCTV ၁၈ လုံးကိုယ်ထူကိုယ်ထ ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးတပ်ဆင်ထားသောလမ်းဖြစ်ပါသည်။ Unicode ရနျကုနျမွို့ လမျးမတျောမွို့နယျ(၁၂)လမျးအလယျလမျးတှငျ၊ ယနနေံ့နကျ […]
“မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား” ၁ ဂရန်ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန်တဲ့ ဗန်ဒါရွက်ရဲ့သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေး မသိသူ ကျော် သွား သိသူ ဖော် စား ဆိုတဲ့ စကားဟာ စကားပုံမဟုတ်ပါဘူး ဒီ နေ့မိသားစုတို့ကို ပြောပြချင် တဲ့ ဆေးနည်းက ဗန်ဒါရွက် အစွမ်းထက်ပုံအကြောင်းပါ […]
တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းဟောစာတမ်း
တနင်ျလာသားသမီမြားအတှကျ ၂ဝ၂ဝ ခုနှဈ တဈနှဈစာကံကွမ်မာအဆိုးအကောငျးဟောစာတမျး တနင်ျလာသားသမီးတို့သညျလုပျငနျးခှငျတှငျယှဉျပွိုငျမှုမြားနှငျ့ထိပျတိုကျရငျရတတျသညျ။ မိမိဆိုငျးငံ့ရပျတနျ့ထားသောလုပျငနျးမြားသကျဝငျအောငျလုပျကိုငျရပါလိမျ့မညျ။သိျု့သျောအကွီးအကဲမြား၏အားပေးထောကျခံမှုမြားရရှိမညျ။အမြိူးသားကောငျးတို့သညျ ဤနှဈတှငျ ကံထူးသူမြားဆိုလြှငျ မမှားပါဘု။လုပျငနျးခှငျတှငျ လာဘျလာဘ အခှမျးအလမျးမြားစှာထှကျပျေါလာမညျ။ အလိုဆန်ဒမြားလညျး ပွညျ့ဝနိုငျသညျ။အပေါငျးအသငျးဆှမြေိုးမြားနှငျ့လုပျငနျးခှငျမြာဆောငျရှကျတတျရတတျသညျ။အိုးအိမျနရောထိုငျခငျးကိစ်စမြားအတှကျစကားပွောဆိုမှုရှိပါမညျ။ အောငျမွငျမညျ။ ထီးပေါကျကိနျးရှိသညျ။ ပညာရေးဆိုငျရာအတှကျ အခှငျ့အထူးခံရရှိနိုငျသော နှဈဖွဈသညျ။ ပညာရေးတှငျဝီရိယရှိမှမိမိမြှျောမှနျးသောပညာရပျကိုဆညျးပူးရမညျ။မိမိအလိုဆန်ဒအတိုငျး ပညာရေးတိုးတတျအောငျမွငျနိုငျသညျ။ ထိုပွငျ မိဘအုပျထိနျးသူမြားသညျ အဆငျ့မွငျပညာရေးတနျးဖိုးမွငျ့တတျလာမှုကွောငျ့ […]
တောင်ငူ တက္ကသိုလ် မြန်မာစာ လက်ထောက်ကထိက ဆရာဦးဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ရင်ထဲကလာတဲ့စာ ….
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသွားသည့်သူများ အပြည့်တင်သွားသည့် အီတလီနိုင်ငံ Bergamo မြို့ထဲက ဖြတ်သွားကြတဲ့ စစ်ကားများ
လက်ရှိကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အတွက် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ အလှူ(အားလုံး သာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေ)
လုံးခင်း ရပ်ကွက်(5)တွင် အချစ်ကို မျှဝေမစားနိုင်တဲ့ မယားကြီးက မယားငယ်ယူထားတဲ့ ကိုယ့်ယောကျာ်းကို ဓါးနှင့်ထိုးသတ်
ဆီးချို ရှိလျှင် ဖန်ခါးသီး စားပါ ….
Myitter.net provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://Myitter.net/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.
escort malatya escort bursa escort konya escort antalya mersin escort